Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo si Adag u Cambaareeyay Dilkii Xildhibaan Aadan Xaaji – Radio Daljir
Abriil 18, 2015 10:20 b 0
Sabti, Abriil 18, 2015 (Daljir) — Guddoomiyaha barlamaanka Puntland Siciid Xasan Shire ayaa si adag u canbaareeyay dilka xildhibaan Aadan X. Xuseen oo maanta kooxo aan hayb-tood la aqoon ay ku dileen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
“Waxaan tacsi u dirayaa dhamaan eheladi iyo qaraabadii uu ka tagay xildhibaanka ,waxaana alle uga baryayaaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo intii uu ka tagay,\_” ayuu yiri guddoomiyaha barlamaanka Puntland maanta oo warbaahinta hadlay.
“Puntland waxey si adag u dhaliilaysaa dilka loo gaystay xildhihaan Aadan Xaaji, waana in cadaallada la horkeenaa kooxihii dilay xildhibaanka,” ayuu hadalkiisa ku daray afhayeenka oo tilmaamay in ammaanka Muqdisho uu yahay mid aan la isku halayn karin waqtigan.
Afhayeenka barlamaanka ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbaday in baaritaan adag lagu sameeyo dilkan ,isla markaana codsaday in gacanta lagu soo dhigo kooxihii soo qorsheeyay dilkiisa ,mana uusan sheegin sababta dilkiisa ka danbaysa.
Ugu dambeyn, xildhibaanka geeriyooday ayaa ka mid ahaa xubnaha barlamaanka Puntland ka soo gala gobolka Sool ,waxaana sida la sheegay lagu dilay xaafadda Taleex ee degmada Hodan meel ku dhow qunsuliyadda Turkiga